उत्तर कोरियाले दुई ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गर्यो? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
उत्तर कोरियाले दुई ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गर्यो?
लेखक : लेखापढी १२ चैत्र २०७७, बिहीबार १६:०३ मा प्रकाशित
जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उत्तर कोरियाले पहिलोपटक जापानको समुद्रमा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ । उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेको भन्दै जापान र दक्षिण कोरियाले उसको यो कदमको आलोचना गरेका छन् ।
‘एल्लो सी’मा दुईवटा छोटो दूरीको मिसाइल परीक्षण गरेको केही दिनपछि उत्तर कोरियाले पुनः दुई ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणलाई ‘अवैध’ भन्दै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ अमेरिकी सेनाले यसलाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि खतराजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले प्योङयाङलाई ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षणमा रोक लगाएको छ ।
उत्तर कोरियाली व्यापारी मुन चोल म्युङलाई मलेसियाबाट अमेरिका सुपुर्दगी गरेपछि उत्तर कोरियाले बिहीबार मिसाइल परीक्षण गरेको हो । म्युङले उत्तर कोरियामा सौखिन सामान उपलब्ध गराउन अमेरिकी वित्तीय प्रणालीबाट रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ । यसै घटनापछि उत्तर कोरियाले मलेसियासँग सम्पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरेको छ ।